Date: 30 Apr 2015Author: Bashiir M. Xersi 2 Comments
Kala guurka la marayo, ku meel gaarka lagu jiray, ee laga guurayo iyo dawlad daa’im ah oo loo guuri doono, waa erayada ugu badan ee maalmahan dhagtaada ku soo dhaca. Haddaba, marka marxaladdan oo kale lagu jiro, waxaa bata miliqa iyo labka. Micnaha waxaa la isku qaldaa waxyaabo badan. Ujeedku waa in la meelmariyo arrimo gaar ah, oo ay wataan dad gaar ah, kana leh dano gaar ah, oo aan lala wadaagayn.
Waxaa batay shirarka isdaba joogga ah, oo ay leeyihiin kuwan loogu yeero saxiixayaasha Roadmapka. Ugu yaraan bishii mar bay kulmaan, wali kaligood ma kulmin, oo ka dhigan sida aysan isu aamin sanayn ama ay isu dagayaan, haddaba, waa kuwama saxiixayshan?.
Madaxweyne Shariif xilka waxaa loo soo doortay muddo go’an, markuu u dhammaaday inta Kampala tagay oo Madaxweyne Museveni hoosta ka galay ayuu sanad ku soo darsaday, ee walibana yiri cid ka hadli kartaa ma jirto. Waa lama taabtaan qodobbadii aan ka keenay Kampala, kana sara mereenba Axdigii KMG ahaa.
Shariif Sakiin sidoo kale, waxaa xilka ka qaaday intii hore ugu dooratay xilkaa in ka badan, haddana laga fujin waayey, isagu garaadkiisa kuma tagin, garabna waa haystaa, waa “Gardarro gara og lagama guulaysto!” garabka wuxuu ka helayaa canaasir ka tirsan madaxda sare ee dawladda, oo iyagu raalli uga ah inuu sii hayo xilkaa iyo shisheeye uu waligiiba u ahaa kabaqaade, illeen hadduusan kalkaale u ahayn iyaba ma garab siiyeene.
Mudane Caalin waxaa xilka qaaday baarlamaanka maamulka Galmudug State, dabadeedna is xajiyey, ee Maxkamadda saree maamulka xukuntay in sharci loo raacay xil ka qaadistiisa, ee inta Odayo isu wacday Xamar iyo meelo kale ka kala tagay xaal mastuur lagu gaaray; inuu xilka sii hayo, waaba yaabe, markii hore maxaa xeer iyo xugun loo samaynayey, haddiiba aan la dhaqangalinayn?.
Wadaaddo Camaamadaysan oo Xabashi ku xiran, deegaanka kala daahay inay maamul u sameeyaan, maalin walba u taagan raacda reeb iyo ku dhufoo ka dhaqaaq, saw ma ahan Jinni ku xaqsay iyo tacab khasaaray? Haddana u jeestay inay dagaal la galaan isla ciidan ka tirsan maleeyshiyada DKMG ah ee goballada dhexe. Iyagana ma jiro, hoggaan rasmiya oo lagu yaqaan, waxay leeyihiin ugu yaraan shan Guddoomiye, Soomoow, Cabduqaadir Macalin Nuur, Xeefoow, iyo Aw libaax oo hadda dig soo yiri.
Intaa iyo inta aanan xusin marka laga soo tago, waxay dadka ku madax xanuujiyeen khilaafkooda aan dhammaadka lahayn, ee aan lahayn hakad iyo joogsi, maalin walbana taagan, sidii loo saxiixay qorshahan loogu yeero “Roadmap” waxaa dhawr kol la qabtay shirar ay isugu yimaadeen, oo ka kala dhacay gudaha dalka iyo dibaddiisa, mid aan is marin waa iyo muran ka taagnayn ma jirin, hadba in koox shirka isaga baxdo yaa dhici jirtay, markay soo cara baaba’do ama laga caratiro ayeyna shirka dib ugu soo laaban jirtay.
Sida aan mudane Faroole loogu faragalin soo xulidda Odayada Bari ee ka qaybgala shirkan Muqdisho ka socda, miyuu garan waayey inuusan faraha la galin soo xulidda xunbo beel kale ku matali doona baarlamaanka. Waxaa la yiri: “Nin waalan Tolkii baa u miyi rqabee!” qof ama cid mudane Faroole ceshata ma la waayey? Marka laga soo tago dhaleecaynta kaga iman karta odayaasha iyo siyaasiinta uu soo damcay inuu u qoondeeyo mudanayaasha ay baarlamaanka ka helayaan iyo inta maanka fayoobi hagayo, saw ma ahan isku qaad boos aan u bannaanayn?!
Sida ku cad inta heshiis ee ay wada saxiixdeen kuwan lagu sheego Saxiixayaaha Roadmapka, dhammaan waxaa ku wada xusan in aysan shuqul ku lahayn soo xulidda xildhibaannada baarlamaanka, oo si taa loo baajiyo waxaa loo igmaday Odayadan ku shirsan Xamar, ee la daba marshay Ansixinta Dastuurka, haddana, looga fadhiyo inay dhawaan soo bandhigaan magacyada xubnaha baarlamaanka, haddana, iyadoo caddaymahaa iyo heshiisyadaasi jiraan, ayuu mudane Faroole doonayaa intuu soo dhaafay xulidda xildhibaannada beeshiisa oo uusan xaq u lahayn marka la eego heshiisyadaa hore, inuu soo xulo xildhibaanno beel kale. Aqriste, ma ila amakaaktay?!
Maamulka uu mudane Faroole hoggaansho waxaa unkay Odayo dhaqameedyo, waxaana hoggaansho siyaasiyiin, sidaa si la mid ah, Maamulka Khaatumo State waxaa unkay Odayaasha deegaanka, waxaana hoggaansha siyaasiyiin, haddaba, miyeysan habboonayn inaan la gacan dhaafin rabitaanka bulshada Khaatumo State, aanna lagu xadgudbin dareenka dadka deegaankaa deggan, ee marna aan raalli ka ahayn in mudane Faroole uu wax u qaybsho, oo waaba yaabe, miyeysan u qaybsan karin siday shalay maamulkaba u dhisteen?!
Haddii mudane Faroole xaq iyo xilba u leeyahay inuu soo xulo xubnaha xildhibaannada Maamulka Khaatumo State, Odaydan ku shirsan Muqdisho muddada labada bil ka badan, ee la daba marshay Ansixinta Dastuurkan lagu daba dhaggan yahay, ee walina u fadhiya inay soo xulaan xubnaha baarlamaanka beel walba u meteli doonta, haddii ayadoon intaa la eegayn mudane Faroole soo xuli karo, maxaa Odayaasha waqtiga looga luminayaa, looguna suntayaa xil aysan hayn?.
Mudane Cabdiwali Gaas ilaa iminka wuxuu kala garan la’yahay danta beeli mudnaan siin karto iyo danta umadda Soomaaliyeed, waa maroo ma ahan markii ugu horraysay ee uu si dadban ama si toos ah u garabsiiyo mudane Faroole, gaar ahaan mawqif la xiriira Maamulka Khaatumo State, waa marka labaade, wuxuu kala garan la’yahay xilka inuusan u hayn Faroole, wakiil iyo ergana ka ahayn Maamulka Bari, ee uu xulka u hayo umadda Soomaaliyeed. Bal sii goob qormadii ahayd: “Gardarrada Gaas oo laga wada gilgishay!”.
Midda kale, ee maadda ah marna maaweelada ahi waa soo jeedinta Shariif Sakiin, marka laga soo tago aqoodarrada uu madaxweynenimo ku doonayo, waxaa muuqata inuu aqli iyo aragtina ka arradan yahay, marka ay ayaan noqoto waa gaarkeede. Aqriste, bal adba eeg, oo maani aragtida hoos ku qoran sida ay ku suuragalayso ama qofi ku aqbali karo, oo bal ii sheeg sida ay aqli saliim ah uga soo fuli karto, Mmrka laga soo tago damaca xaddhaafka ah iyo danaystenimada?.
Aragtidu waa sidan: “Marka hore madaxweyna ha la doorto!” musharraxna waan ahay- sii baadi goob qormadii ahayd: “Anna Musharrax baan ahay!”- waana tartamayaa, haddaan ku guulaysto waa saan rabay, haddaan guuldarraysto, haddana, waxaan u tartamayaa guddoonka baarlamaanka.
Waxaa la yiri: “CAQLIGAAGOO BATA MACRIFADAADUU YAREEYAA!” malaha meesha CAQLIGA laga yiri, waxay ku habboonayd in DAMAC laga yiraa, illeen qof caqli lehi, marna kama dhalanayso in caqligiisu macrifadiisa yareeyee, inuu sii badiyo ma ahane, haddii caqliguusu batana kumaba sii jirto.
Mudane Caalin inuu xanuusan yahay marka laga soo tago, inuu bukaan socod yahay marka laga soo tago, inuu qalliin Beerka ah maalmo ka hor galay marka laga soo tago, inuu Istibaal hadda ka soo baxay marka laga soo tago, xaaladdiisa caafimaad, ee si cad looga dheehan karo sawir wadareedkii laga qaaday shirka marka laga soo tago, marka laga soo tagoo…
Ugu dambayn, damaca beelaysan iyo sadbursiga qabyaaladaysan, hanqaltaagga aflabadi ah iyo rabitaannada sirgaxan, waxay muujinayaan sida ay u fog tahay dawlad Soomaali yeelato, mid xunba ha ahaatee, maadaama la yiri: “DAWLAD XUMI DAWLAD BAY DHAANTAA!” oo xitaa mid xun aan la helayn, inta sidan loo dhaqmayo.
Aqriste, bal adba suuree, qaabka ay noqon doonta Dawladda daa’imka ah ee loo gudbi doono ku meel gaarka ka dib? Inta wax walba laga hormarinayo damac beel iyo qorshe qabiil, han qof iyo dan shaqsi, ee danta guud aan dan laga ahayn, Wallee inaan dawlad iyo maamulba hirgalayn, ee maa labada mid la doorto.
Faallada waxaan ku soo afmeerayaa, tix Abwaan C/aadir Xersi (Yamyam) (AUN) ka jeediyey shirkii Addis Ababa, hilaadintii 1993-dii, tixdaa ood is leedahay waxay ka hadlaysaa maanta iyo shir walba oo Soomaali ku saabsan, ee bal ila dhuuxa murtidan qiimaha badan. Abwaanku wuxuu yiri:
Haddaan weynnay maan iyo
Previous Previous post: Fulin hungo iyo hoggaan fashilan! Q2AAD
Next Next post: Fulin hungo iyo hoggaan fashilan! Q3AAD
2 thoughts on “Saxiixayaasha Roadmapka iyo rabitaankooda sirgaxan!”